Nandriaka ny ra tany Ilakaka : niampatrampatra ny faty, dahalo 22 lavon’ny zandary | NewsMada
Nandriaka ny ra tany Ilakaka : niampatrampatra ny faty, dahalo 22 lavon’ny zandary
Nanomboka tany Tanamaro Bemanga, kaominina Ilakakabe, nitohy tany Isalo, nifarana tao Beraketa Mailo Ranohira ny fifandonana mahery vaika teo amin’ny andian-dahalo sy ny zandary, omaly maraina. Nandriaka ny ra, niampatrampatra ny faty. Dahalo 22 lahy be izao indray lavon’ny balan’ny zandary.
Nahery vaika ny fifandonana teo amin’ny zandary sy ny fokonolona ary ireo dahalo manodidina ny 50 eo tany Andohan’Ilakaka, omaly vao maraina. Raha ny vaovao avy amin’ny zandary, dahalo 12 maty voatifitra tamin’izany, olona efatra naratra, ary tompon’omby iray maty. Raha ny vaovao voaangona tany an-toerana kosa, tafakatra 22 ny dahalo maty, noho ny fisian’ny fifandonana tany Beraketa Malio ao amin’ny kaominin’i Ranohira.
Voalaza fa nanafika tao amin’ny tanànan’Antanamaro Bemanga, kaominina ambanivohitra Andohan’Ilakaka ireo dahalo manodidina ny 50 ireo, nitondra Kalachnikov roa sy basim-borona marobe. Araka ny vaovao avy amin’ny zandary, nandoro trano sy naka omby ireo dahalo ireo. Trano dimy nodoran’ireo, ary omby 400 no lasany tamin’izany. Maty voatifitr’ireo dahalo tamin’izany ny tompon’omby iray antsoina hoe Soja.
Nanenjika ireo dahalo avy hatrany ny zandary niampy ny fokonolona any an-toerana, ka tratra teo amin’ny fidirana ny valan-javaboahary Isalo ireo dahalo, ka teo no raikitra ny fifandonana. Tamin’ny 6 ora sy sasany maraina teo, raha iny hanapaka ny lalana akaikin’ny toerana fanaovana fifaninanana moto any an-toerana ireo dahalo ireo. Tamin’izany no nahafaty ireo dahalo 12 lahy, sy namparatra ireo fokonolona dimy. Tafaverina avokoa ny omby, andanin’izany.
Nampiakarin’ny zandary tao Ilakaka avokoa ny razan’ireo dahalo 12 maty ireo. Araka ny fanazavana, mbola hofantarina ny momba azy ireo, ary andrasana ny fakan’ny havany ny razana. Nitangoronan’ny olona tao Ilakaka ny fitondrana ny fatin’ireo dahalo tany an-toerana. Feno loaky ny bala ny vatany, niravaka moara avokoa ny ankamaroan’izy ireo, ary mbola tovolahy, raha ny fanazavana. Nirohotra maro ny olona tao Ilakaka, noho izany, naka sary sy nijery ireo dahalo maty. “Tsy mbola fantatra na misy havany ireo tonga teo an-toerana fa andrasana izay ho avy haka ny razana eo”, hoy ny fanazavana.
Fifandonana tany Beraketa
Mbola nitohy ny fifanjevoana ka nipaka tany amin’ny tanàna atao hoe Beraketa Malio ao amin’ny kaominin’i Ranohira ny fifandonana, omaly, ka dahalo 10 maty tany an-toerana. Vokatry ny fandraisan’andraikitry ny mpitondra any an-toerana, tarihin’ny lehiben’ny faritra, Atoa Mosa Fernad, sy ny komanda ny kompania, nifarimbona ny zandary avy ao Ihosy sy Andiolava ary Ranohira nanampy ny zandary ao Ilakaka manenjika ireo dahalo ka nahitana izao vokatra izao noho ny fampitaovana azy ireo. Nanampy betsaka azy ireo ihany koa ny fokonolona any an-toerana. Marihina fa tsy nisy maratra ny zandary nandritra izao fifandonana izao. Vokatr’ity fifandonana ity, tsy tafiditra tao Ilakaka ny fiara mpitatitra rehetra avy aty Antananarivo fa niverina tao Ranohira daholo. Niverina tamin’ny laoniny ny filaminana any Ilakaka, omaly hariva. Ny zandary rahateo efa manao fisafoana manerana ny tanana any an-toerana. Fantatra fa nampitomboina mihitsy ny isan’ny mpitandro filaminana miasa, noho ny fahamailoana ny amin’ny mety ho tampody fohy ataon’ny dahalo.
Na teo aza ireo maty vokatry ny fifandonana, maromaro ihany ny tafatsoaka tamin’izy ireo. “Fomba fanaon’izy ireo ihany ny manao valifaty rehefa tsy nahomby ny fanafihana ataony ”.